दैवि प्रकोपमा परी यो वर्ष १८१ को ज्यान गयो – Everest Times News
दैवि प्रकोपमा परी यो वर्ष १८१ को ज्यान गयो
२०७७ श्रावण १०, शनिबार २०:०८
काठमाडौं । गत वैशाखयता दैवि प्रकोपले १८१ जनाको ज्यान लिएको छ । यसपालि मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार वैशाखदेखि यही साउन ९ गतेसम्मका विपद्मा १८१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अझै ५१ बेपत्ता छन् । विपद्मापरेर २७८ घाइते भएका छन् । यसपालि सबैभन्दा बढी पहिराले क्षति गरेको छ । पहिराका कारण मात्रै १२८ जनाले ज्यान गुमाएकाराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।
वैशाखयता पहिराबाट मात्रै १२८ को मृत्यु भएको छ, ४४ बेपत्ता छन् । यस्तै ११४ जना घाइते छन् । बाढीबाट छ को मृत्यु, सात बेपत्ता रतीन घाइते छन् । चट्याङ लागेर ४७ जनाको मृत्यु भएको र १६१ जना घाइते भएका प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मनसुन शुरु भएको समय (जेठ ३१) पछि साउन ९ गतेसम्म भने पहिराले धेरै मानिसको ज्यान लियो । त्यसपछि चट्याङले बढी मानवीयक्षति भएको छ । सो अवधिमा बाढी, पहिरा र चट्याङका कारण १४१ जनाको मृत्यु भएकामा पहिराले मात्रै १२६ जनाको ज्यान लियो ।बेपत्ता भएका ५१ मध्ये ४४ जना पहिरामै परेका पोखरेलले जानकारी दिए । बेपत्ताको अहिले पनि खोजी जारी छ ।
उक्त अवधिमा पहिरामा परेर ११३ जना घाइते भएका प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै बाढीका कारण तीन जनाको मृत्यु भएको छ भनेछ जना बेपत्ता छन् । चट्याङ परेर १७ जनाले ज्यान गुमाए भने ४२ घाइते भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो १० वर्षमै मनसुनपछिको उक्त अवधिमा सबैभन्दा बढी पहिराको क्षति भएको पोखरेलले राससलाई बताए । उनका अनुसार यसपालि भेल पहिरालेनसोचेको ठाउँमा ठूलो क्षति बनाएकाले त्यस्ता जोखिम ठाउँमा बस्दा वर्षाका बेला सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ ।
मनसुन शुरु भएकै दिन पर्वतमा जेठ ३१ गते नौजना भेल पहिरामा परेर बिते । त्यसपछि पाल्पा, बझाङ, जाजरकोट, कास्की, सिन्धुपाल्चोक, गुल्मी, लमजुङ र म्याग्दीमा ठूला पहिरो खसेर धनजनको ठूलो क्षति भएको हो । यसपालि गत असार २५ देखि २९ सम्म रसाउन ४ देखि ६ गतेसम्म मुलुकका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा भएको थियो ।
सरकारले विपद्को परेका घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई रु दुईलाख दिने र एकै परिवारका अन्य व्यक्तिको पनि मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप रु एक लाखका दरले दिने निर्णय गरिसकेको छ । राहततथा आवास व्यवस्थापनलाई अहिले सरकारले तीव्र रुपमा अघि बढाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
माना रोपेर रोपेर मुरी फलाउने समय
विभूषणमा प्रयोग हुने सुनको परिणाम घटाई बनोटमा हेरफेर गरिने
हैजा फैलिने भन्दै सडकमा खानेकुरा बेच्न निषेध
केआरएसएको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न, ९६ पाउण्ड रगत संकलन
हैजासम्बन्धी समस्या पर्यो ? ११८० मा फोन गर्नुस्
नेवा: नख: न्युयोर्कको आयोजनामा सातौं सामुहिक ईही कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौंमा फोहरको वर्गीकरण नगरे जरिवाना
रामायाण सर्किटहुँदै धार्मिक पर्यटकसहित आइपुग्यो भारतीय रेल
काठमाडौंमा चार जनामा हैजा : सतर्कता अपनाउन आग्रह
न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्न समिति गठन
केआरएसएको स्थापना दिवसको अवसरमा रक्तदान आयोजना
1 भिक्षु लामा फुरिको पाइला पछ्याउँदै डा. आङगेलु बने बौद्ध भिक्षु
2 नेवा: नख: न्युयोर्कको आयोजनामा सातौं सामुहिक ईही कार्यक्रम सम्पन्न
3 केआरएसएको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न, ९६ पाउण्ड रगत संकलन
4 साथी अनि साथ
5 नयाँ दिल्लीमा भेला, रात्रिक्लब, जीम र स्पा बन्द
7 केआरएसएको स्थापना दिवसको अवसरमा रक्तदान आयोजना
8 राउटे जीवनशैलिको उपन्यास ‘कदम’ सार्वजनिक
10 किन घट्यो रेमिट्यान्स